Fanabeazana tsimialonjafy • AoRaha
Bao tsy mivily • Sosialy
Miteraka adihevitra eo amin’ireo ray aman-dreny maro ny momba ny tetiandrom-pampianarana araka izay voafaritra ao anatin’ny
Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE). Misy ihany ireo teboka sasantsasany izay mampizarazara fa isan’ny tsy itovizan’ny fomba fijery ny mikasika manokana ny faharetan’ny taom-pianarana, ny fitsinjarana an’ireo fotoam-pialan-tsasatra ary ny vanim-potoanan’ny fanadinana.
Sarotra tokoa ny mampitovy tadin-dokanga ny rehetra. Nanampy trotraka ihany koa ny fiovaovan’ny mpitondra ka mahavery ny mpanaraka ny raharaham-pirenena amin’ny lafin-javatra sasany, rehefa manonona ny fitohizan’ny asa aman-draharaham-panjakana na iza na iza no eo amin’ny fitantanana ny firenena, ka voakasika manokana ny lafiny fanabeazana. Mahavariana aza moa ny tsy mba nanendrena haingana ny mpisolo toerana raikitra ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena rehefa lasa tamin’ny andraikitra hafa ilay tompon-toerana farany. Tahaka ny hoe ambony lavitra mihoatra ny lanjan’ny fanabeazana ny kajikajy politika
rehetra. Tsy ny olona no tsy misy na hoe antony goavana no iandrasana ny fametrahana minisitra tena izy eo amin’io andraikitra io, nefa ny fotoana mandeha, ary isan’ny olana sahady izao firoaroan’ny sain’ny ray aman-dreny izao. Tsikaritra hatramin’izay naha Repoblika an’i Madagasikara izay ny fiovaovan’ny rafi-pampianarana teto amintsika, izay tsy voatery ho mahakasika ny tetiandro ihany fa na ny votoatim-pampianarana na ny lafiny pedagôjika raha ny marimarima kokoa. Efa solafaka sy nanao sorona taranaka maro tamin’io lafiny io isika, ka sanatria mbola hanimba taranaka indray raha tsy mahay miray hina sy saina rehefa tsy maintsy hanova ihany. Asa raha mbola manana fotoana hanarenana ny lesoka ny mpitondra ankehitriny satria izy ireo aloha no tompon’andraikitra voalohany amin’izao, fa tsy sanatria rehefa zava-bita tsaratsara dia tafiditra amin’ny « velirano », na raha mamofompofona tsy fahombiazana dia lova ratsy navelan’ny teo aloha! Heno toa mikaon-doha sy mikenon­kenona any ambadika any ihany ireo sokajin’olona eo amin’ny sehatry ny fanabeazana mba hamoaka vokatra matotra amin’io PSE io. Miandry ny rehetra. Aleo mba tsy hiverin-dalana, nefa kosa handroso ho amin’ny fanomezana kalitao mendrika ny taranaka amin’ny sehatry ny fanabe­azana. Lova sarobidy indrindra mantsy ny fahaizana amam-pahalalana raha tena faniriantsika ny hananganana firenena vanona sy mandroso. Ny vokatra azo sy ny fahafaham-pon’ireo ray aman-dreny ary ny zanany no ho vavolombelon’ny asa natao tamim-pitiavana. Sao sanatria hozarain’ny fironana hatramin’ny fanabeazana ka samy hanana ny azy, na dia samy zanaka malagasy eto amin’ity firenena tokana ity aza. Atsipy ny teny any am-pon’ny mahalala.
Fanatsarana famatsiana eto Antananarivo Fantatra ny toerana hametrahana an’ ireo tobim-pamokaran-drano vaovao
Minisiteran’ny atitany Hanomboka anio ny fanoloana fahazoan-dalana mamily fiara biômetrika
Andrana fanadinana CEPE :: Ambany ny taham-pahafahana ho an’ ny CISCO Antananarivo renivohitra